TACO TERRIER DOG FAMPAHALALANA MOMBA NY FIOMPIANA SY SARY - ALIKA
Taco Terrier Dog Fampahalalana momba ny fiompiana sy sary
Alika mitambatra Chihuahua / Toy Fox Terrier mifangaro
Tonka ilay alikaola kely Taco Terrier alika kely 1 taona - Taco Terrier ny reniny ary Taco Terrier ny rainy, izay mahatonga azy ho hybrid F2 (F2 = hybrid an'ny faharoa).
Ny Taco Terrier dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Chihuahua ary ny Toy Fox Terrier . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
Mpanoratra International Canine Registry®= Chitoxy
Bailey ilay mainty Toy Fox Terrier / Chihuahua mifangaro alika (Taco Terrier) amin'ny 7 volana
Bailey ilay mainty Toy Fox Terrier / Chihuahua mifangaro alika kely (Taco Terrier) amin'ny 3 volana
Yoda ilay alika kely Taco Terrier eo amin'ny 2 volana eo ho eo, milanja 3 ½ pounds
Maya the Taco Terrier toy ny alika kely amin'ny 6 herinandro
'Ity no Moto, ny Chihuahua x Mini Fox Terrier (Taco Terrier) ahy dia alika kely amin'ny 13 herinandro.
'Tamin'ny nahitako voalohany an'i Moto tamin'ny 9 herinandro dia nitovy tamin'ny voalavo laboratoara lehibe iray nisy lohan'ny paoma Chihuahua mahazatra ary sofina kely mivalona kely mahafatifaty. Io no nahasarika ahy voalohany - kely, fotsy misy tummy mavokely ary lohan'ny paoma kely manify indrindra. Tsy nanana maso be bibikely Chihuahua madio izy ary tena tiako ny sofiny kely mivalona. Tao anatin'ny herinandro vitsivitsy dia nihalehibe ny lohany ny sofiny ary nilamina tanteraka izy ireo. Tao anatin'ny volana vitsy voalohany dia alika kely saro-kenatra izy izay hanaraka ahy HITSITRANY. Na dia noheveriko fa matory tsara aza izy dia hiala ny efitrano aho ary hitodika ary eo izy. Tamin'ny voalohany dia nandia dingana tena manaikitra izy (ny ankamaroako dia tsy azoko nalaina ho mpihinana raha tsy tapitra teo am-bavany ny tanako. Hatramin'ny nihalehibe dia hitako fa tsy mivadika izy ary mpiambina kely. Mampiseho fihetsiketsehana mampihoron-koditra indrindra izy — mihozongozona ny lohany (toa mamono voalavo). Zazalahy mahazatra izy, sahy sy be herim-po loatra noho ny habeny (toy ny Chihuahua). Amin'ny ankapobeny, izy dia namana mahafinaritra ary alika kely tena manan-tsaina. Na dia be fitiavana sy TENA milalao aza (afaka mampiala voly ny tenany izy) dia aleony mipetraka eo akaikinao toy izay amboninao.
'Tonga nilanja 5 kg teo ho eo izy ary nosoloin'ny tereran'ny sarivongana ny lohan'ny paoma. Mbola fohy kokoa anefa ny fofony. Fohy loatra noho ny vatany ny tongony — fohy sy lava volo tokoa izy ary misy rambo miforitra tery. Ny hany toetran'i Chihuahua hitako dia ny rambony, ny haavony ary ny kely aretin'alika kely . Ny lanjany, ny tarehy ary ny toetrany feno tahotra dia mampihorohoro avokoa.
'Amin'ny ankapobeny, 10/10, karazana alika mahafinaritra. Raha ny marina dia tsy maintsy nitady iray hafa aho — Chihuahua x Foxy x Mini Foxy (fa alika mijery / manao fihetsika hafa tanteraka). '
Poneko ilay Taco Terrier (Chihuahua / Toy Fox Terrier) alika kely amin'ny 12 herinandro
Tonka ilay sôkôla tricolor Taco Terrier puppy tamin'ny faha-8 volana - Taco Terrier ny reniny ary Taco Terrier ny rainy, izay mahatonga azy ho hybrid F2 (F2 = hybrid an'ny faharoa).
Tonka ilay alikaola Taco Terrier alika kely tricolor amin'ny 5 volana
Hijery ohatra misimisy momba ilay Taco Terrier
Sary Taco Terrier 1
asehoy ahy ny sarin'ny alika mpiandry ondry alemanina
firy ny mastiff anglisy
bulldog amerikana mainty sy fotsy
alika fotsy misy maso manga
spaniel akoho sy chihuahua mifangaro
pitbull orona manga sy mix amerikana bulldog